I-Ultrasonic Mixers ye-Drilling Muds ne-Packer Fluids - Hielscher Ultrasound Technology
Ukushayela umthamo (udaka wokugaya) kusetshenziselwa ukusikwa kwemithombo yamafutha, imithombo yamachiza yemvelo, imithombo yokuhlola (imithombo yasendle) noma imithombo yamanzi. Ama-reactor Ultrasonic yi-technology ephumelelayo yokuxuba, ukusabalalisa, i-emulsification ne-degassing yodaka olusekelwe ngamanzi (i-WBM, i-aqueous), udaka olusekelwe ngamafutha (OBM, non-aqueous) noma udaka olwenziwe ngokwenziwa (SBM).
Ukwakhiwa kanye nekhwalithi engaguquki yokudoba udaka kuyisici esiyinhloko emisebenzini yanamuhla yokudoba. Ukwakhiwa kwodaka kanye nezici kuthinta ukuzinza kahle, ukugcoba, ukupholisa kanye nesilinganiso sokudoba ukungena. Ngisho nezinkinga ezincane ne-drilling fluid zingavimbela ukusebenza konke ukugaya. Ukucindezela ngokweqile okubangelwa udaka obunzima kakhulu noma obuthakathaka kakhulu kungabangela ukulahlekelwa okuphawulekayo kokusabalalisa.
Ama-WBM ngokuvamile ayenziwe ngamanzi ahlanzekile, amanzi olwandle, noma (agcwele noma ayenziwe) i-brine kanye nobumba bemvelo nama polymers. I-OBM ne-SBM ziyi-system-in-emulsion izinhlelo ezinesisekelo samafutha (idizili, amafutha omsoco) noma isisekelo samakhemikhali (ama-olefini nama-parafini) njengesigaba esiqhubekayo (sangaphandle), kanye ne-brine njengesigaba sokusakaza (kwangaphakathi). I-emulsion kufanele iqiniswe ngokwanele ukuze imelane nokwengezwa kokugeleza kwamanzi okugeleza. Okungajwayelekile kunamanzi amafutha (ukuguqula ama-emulsion ama-muds) amafutha emanzini (ama-emulsion muds). I-ultrasonic emulsification isebenza kokubili izinhlobo ze-emulsion futhi ifinyelela kahle ukuzinza kagesi kwe-brine yangaphakathi noma isigaba samanzi.
Ama-reactors ama-Hielscher ultrasonic asebenza kahle kakhulu futhi asebenza ngokuxubile kakhulu okukhipha izingcweti ekusetshenzisweni kokukhiqiza. Ngokuvamile, izigubhu ze-ultrasonic zisetshenziselwa ukhonteli ophezulu we-throughput oyedwa-pass processing noma okusetshenziselwa ukuqhutshwa kwe-batch processing.
Ungasebenzisa ukuxuba kwe-ultrasonic ku
Lungiselela ama-masterbatches aphezulu
Hlanganisa ukulungiswa kokusetshenziselwa uketshezi noma iziphuzo zamaphakethe
Thuthukisa futhi uhlele ama-muds angcono okumba
Ukwakhiwa Kwezingxenye Zokudayisa Amadaka
Ukukhiqizwa kwamakhemikhali kanye nezithasiselo, ezifana nama-sulfur liquid polymer ezizuzwa amandla okucubungula okuphezulu nokuguquguquka kwe-shear ultrasonic ukuxuba. Ukuxubana kwe-Ultrasonic kuvula amandla okugcwele wezithasiselo, njenge-viscosifiers, i-filtrate reducer noma izithasiselo ze-polymer. I-ultrasonic cavitation ifaka ama-powders ngokushesha futhi ngokuphelele ngenkathi kubhalwa udaka ukuxuba.
Ngokuxubana kwe-emulsions yamanzi / oketshezi, i-Hielscher MultiPhaseCavitator ithuthukisa ukuxuba okuhambisanayo kwezigaba ezimbili endaweni enkulu ye-shear cavitational. Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana ne-MultiPhaseCavitator, sicela uchofoze lapha!
Ukuxubana kwe-Ultrasonic kuthuthukisa ukuthungqwa kwenqwaba emigqeni yemingcele noma izinhlayiya eziketshezi. Lokhu kunciphisa isikhathi esidingekayo ukulungiselela amabhulashi noma amabhisi agcwele, isib. I-calcium chloride brine, i-calcium bromide brine, i-zinc bromide brine, noma i-potassium ne-cesium formate brine.
Ama-masterbatches we-Clays noma ama-Additives
Ungasebenzisa i-ultrasonic shear ukuxuba ukwenza ukugxila okuphezulu noma ama-master-batches (isib. Calcium carbonate (choki), ama-deflocculents noma ama-scavengers) ngaphambi kokufaka lokhu ekufakweni kokudaka kokugcina.
Ukukhiqizwa kwama-Drilling Fluids kanye nama-Packer Fluids
Ukushisa udaka, njengokuqina kwe-shale, i-viscosity, ukupholisa noma ukugcoba kuncike ezintweni eziningi. Ukungafani nokuvumelana kwekhwalithi kubaluleke kakhulu. Ukuhlanganiswa kwe-shear Ultrasonic kusebenza kakhulu ekukhiqizeni ukusabalalisa usayizi wezinhlayiyana ze-particle ngakho-ke ukuhlakazeka okungcono nokumiswa kwe-emulsion. Lokhu kuvimbela ukuhlukaniswa kwesigaba noma ukuxazulula ngesikhathi sokugcina, ukuthutha noma ngenkathi kudoti.
Namuhla imininingwane yokudoba udaka ishintsha njalo. Izakhi ze-Hielscher ultrasonic zishintshashintsha kakhulu ekugayeni izinguquko zokwenza amanzi. Ngokushintsha kusukela ekuhlanganisweni kwe-batch yendabuko ekuxubeni kwe-ultrasonic-single-pass, ungenza izinhlobo zokudoba ezihlukile kumshini ofanayo we-ultrasonic. Lokhu kusiza ukunciphisa isikhathi sokulondoloza kanye nesitoreji sesitoreji.
Ukusabalalisa kwamadaka okuvamile (isib. I-bentonite) kanye nobumba obuphilayo obuphathwa ngokukhethekile emithonjeni yamanzi buveza ama-gel nama-slurries ama-viscous, ama-thixotropic noma ama-shear-thinning. Uma ekhonjiswe ku-shear ephezulu ye-ultrasonic i-viscosity ihlaselwa esimweni samahhala-esihambayo. Lokhu kusiza ukuhlakazeka nokuphatha. Ngenxa yalesi sizathu, i-sonication iyasebenza kakhulu ekuxubeni ama-slurries we-thixotropic ne-shear-thinning. I-Sonication ibangela ukuhlakazeka okungcono kwezinhlayiya ze-bentonite / amaplatelets kanye nezici zokugcoba ezithuthukisiwe. Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nokusabalalisa kwe-ultrasonic kwe-bentonite, sicela uchofoze lapha!
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kwe-bentonite (eyenziwa nge-mixer ultrasonic UIP2000hdT)
Ama-modifiers e-Rheological, ama-thickeners kanye nama-stabilizers (isib. Izinsini, i-glycol, i-carboxymethylcellulose, i-polyanionic cellulose (i-PAC) noma isitashi) zidinga ukuhlakazeka okuhle ukuphumelela okukhulu. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nokuhlakazeka kwe-ultrasonic kwabaqashi, njenge-xanthan gum ne-guar gum, sicela uchofoze lapha!
Ama-weighting agent, njenge-barium sulfite (i-barite) akumele ahlukaniswe nodaka ngesikhathi sokugcina, ukuhamba noma ukugaya. Ngokuhambisana ne-Stokes 'Law, izinhlayiya ezincane ezincibilika kancane noma cha nakancane. Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kugwema izimbulunga ezinkulu, ezingabangela ukungahlakazeki kokungahlali. Ukuhlakaza uhlelo kungakwandisa ukubekezelelana kwayo kokuqina, okwenza kube khona ukulinganisa kuze kube ngu-20 lb / gallon (US) noma 2.4g / cm3.
Ukuqothula uMdaka Wokugaya
Lapho ulungiselela ama-muds wokudoba, i-bentonite clay powder namanye ama-powders anezengezo angenisa umoya omningi odakeni lokubola. Le gazi ibanjwe ngaphakathi kwezinhlelo zamanzi futhi ingabangela ukuhlukaniswa nokulahlekelwa ku-emulsifier noma ukusebenza kwe-stabilizer. Ukucindezelwa okuphindaphindiwe (imijikelezo ephezulu yokucindezela) kanye nezinto ezingavamile (imijikelezo ephansi engcindezi) ngesikhathi i-ultrasonication ichithwa igxuma ukufuduka bese yenza ama-microbubbles amancane. Amagagasi e-ultrasonic aphoqelela ama-microbubbles kagesi abe yi-coalescence. I-ultrasonic high shear cavitational iyanciphisa i-viscosity ye-shear thinning kanye ne-thixotropic drilling fluids. Lokhu kuvumela ukuthi ama-bubble emoyeni akhule ngokushesha. Lokhu kuholela ekuhlukaneni kwegesi okungcono kumathangi okuhlukanisa phansi noma ukuguquka kwe-vacuum. Ukwehliswa kwemithi kwandisa isisindo somdaka, kunciphisa i-viscosity nezinkinga zokuhlukanisa. Ama-bubbles amancane kagesi anciphisa ukusetshenziswa kwe-emulsifiers, stabilizers, surfactants noma ama-agents dispersing. Lokhu kunciphisa izindleko ngebheyili ngayinye. Ukwehliswa kokuqukethwe kwegesi kunganciphisa ukukhula kwe-microeral aerobic, futhi.
I-Degassing of liquids iyisisetshenziswa esinamandla samadivayisi we-Hielscher ultrasonic. Ividiyo ikhombisa i-Hielscher UP200S ngesikhathi sokukhiqizwa kwamafutha.
Ukushayela Ukuthuthukiswa Kwamadaka Nokuthuthukiswa Kwamadaka
Imithetho emisha ibeka inani lamakhemikhali athile ukuthi azosetshenziselwa ama-muds ukuze anciphise umthelela wendawo. Lokhu kudinga ukulungiswa kokuhlelwa kohlaka olusha lokulawula. I-Ultrasonication ingakusiza ukuba ukwandise ukusebenza kwezingxenye zodaka zokugaya, ngakho-ke ungasebenzisa izinto eziphansi nezindleko. U-Hielscher unikeza ukuhlolwa kokudaka udaka embukheni wethu. Kubandakanya izilinganiso ze-visemicity kinematic emazingeni okushisa ahlukahlukene kanye nangaphandle kwe-shear.
Umshini Omkhulu Wokusetshenziswa Kokusetshenziswa Kwezimboni
Ama-reactors ama-Hielscher ultrasonic angakwazi ukusingatha izinhlayiya ezincane nezilahlayo noma ama-agglomerate. Ngakho-ke ungaqala nge-agglomerated slurry noma i-drilling components. Uma ukuxuba ama-powders kanye nezinhlayiya ku-probes e-flux ultrasonic kukhombisa ukuphuza okuncane kakhulu kunama mixers e-rotor-stator noma ama-homogenizers aphezulu. I-Hielscher ultrasonic probes yenziwe ngebanga lesi-5 titanium ukwenzela ukumelana nokuqina kwe-corrosion, isib. Uma amanzi olwandle asetshenziswa kuma-WBM esikhundleni samanzi ahlanzekile. Izigubhu ze-Ultrasonic azikho izimpawu ezijikelezayo noma izibhebhe. Ama-mixers ase-Hielscher ultrasonic yi-grade industrial yezidingo ezisindayo – onshore kanye ne-offshore (rig). Ngokuvamile, izigubhu ze-ultrasonic ziqondiswe ngokuqondile ukuze zibe nezinyathelo ezincane.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nokuxuba kwe-ultrasonic. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Ukusetshenziswa kokuxubana kwe-ultrasonic embonini yamafutha neyegesi kuqhubekela phambili ngaphandle kokugaya ama-muds.
Ukuqothula ama-effluents kanye nenqubo yamanzi
Ukuxubana nama-scavengers (isb. Ama-H2S ama-scavengers) noma amakhemikhali avikelayo, njenge-scale and corrosion inhibitors
Nciphisa izikhathi zesimiso zesimiso sokumiswa okusheshayo
Ukulungiselela i-ultrasonic ye-brine egcwele noma yokwakha i-brine
Nciphisa umsebenzi webhaktheriya emaqenjini okumba
Ukucubungula amafutha aphansi, isib
Ukulungiselela isampula yamafutha nama-sediment